Fortnite Android နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသင့်သမျှ – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 5912 Views
Fortnite Android နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသင့်သမျှ
admin Aug 02, 2018
PC တွေ Console နဲ့ iOS gamer တွေ အဆော့အများဆုံးဂိမ်းဖြစ်နေပေမယ့် Android သမားတွေအတွက် သတင်းအစအနတောင်သိပ်မကြားခဲ့ရတဲ့ Fortnite က အခုရော ဘယ်လိုသတင်းလေးတွေထွက်လာနေပြီလဲ??
လက်ရှိအချိန်ထိတော့ Android User တွေအတွက်မထွက်သေးပေမယ့် မကြာတော့တဲ့အချိန် (သြဂုတ်၂၄)လောက်မှာ ထွက်လာနိုင်ချေရှိလို့ သိပ်စောင့်ရတော့မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ မကြာခင်ကိုယ့်ဖုန်း တက်ဘလက်တွေမှာရတော့မယ့် ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေသိထားသင့်လဲကြည့်ရအောင်..
Fortnite on Android ကဘာလဲ??
မိုဘိုင်းလ်ဗားရှင်းကလည်း PC တွေ console တွေမှာလိုပဲ လက်နက်တွေလည်းအတူတူ၊ မြေပုံတူတူနဲ့ update schedule တွေလည်း တူတူပဲလာမှာပါ။
Control တွေကလည်း Touchscreen ကနေပဲထိန်းရုံပဲဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းကောက်တာတွေ၊ တံခါးဖွင့်တာတွေအတွက်တော့ အော်တိုလုပ်ပေးတော့ဆော့ရပိုလွယ်ပါတယ်။ UI Element ကတွေကတော့ နည်းနည်းလေးကွဲပြားပါတယ်။ Extra building button တွေပေါ်လာတတ်တာတွေ on-screen ခြေရာတွေရော အနီးအနားဘယ်ကနေသေနတ်သံလာသလဲဆိုတာပြောနိုင်တဲ့ Gunshot indicator တွေကလွဲရင် ကျန်တာက တူတူပါပဲ။
Epic Games ကတော့ ထွက်မယ့်ရက်အတိအကျကို ခုချိန်ထိမကြေညာသေးပေမယ့် ဒီနွေရာသီမှာထွက်မယ်လို့မှန်းထားကြောင်းတော့ ပြောထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှာလည်း Android ဗားရှင်းကိုမကြာခင်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထွက်မယ်လို့ပြောပြီးသားပါ။
ဒါပေမယ့် အခု XDA Developer တွေနဲ့ 9to5Google ကတော့ Android တွေအတွက် Fortnite က ဒီလမကုန်ခင် Samsung Galaxy Note9တွေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးထွက်လာမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Galaxy Note9တွေကိုတော့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Fortnite Android က Note9တွေအတွက်ပဲ သီးသန့်အနေနဲ့ ရက် ၃၀ လောက်အရင်စောရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ Android ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ စက်တင်ဘာ ၂၃ လောက်မှ ရမယ့်ပုံပါပဲ။
ဒါ့ပြင် Note9ကိုဝယ်တာနဲ့ ($150/AU$200 လောက်တန်တဲ့) free V-Buck တွေအပြင် Skin အသစ်တွေနဲ့ တခြားတခြားသော အရာတွေပါ ရဦးမှာဖြစ်ကြောင်း ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။
Fortnite ကို ဘယ် Android ဖုန်းတွေမှာ ဆော့လို့ရနိုင်မလဲ??
Epic ကတော့ နှုတ်လုံစွာနဲ့ဘာသတင်းအချက်အလက်မှမပေးပေမယ့် XDA Developer တွေကတော့ ဂိမ်းရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ် Source code တွေကိုရှာတဲ့အခါမှာ Fortnite ဆော့လို့ရမယ့် Android ဖုန်း အလုံး ၄၀ လောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။ အောက်မှာဆော့လို့ရမယ့်ဖုန်းတွေရဲ့စာရင်းကိုပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက ဂိမ်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီဖုန်းတွေအပြင်နောက်ထပ်ဖုန်းတော်တော်များများကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးမှာပါပဲ။ ဒီထဲမှာဆို ပါသင့်တဲ့ Huawei P20 Pro, OnePlus 6, LG G7 ThinQ တွေတောင်မပါသလို ဘယ်တက်ဘလက်မှလည်း မပါသေးတော့ နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ?
Fortnite ကတော့Google Play Store ပေါ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Source code တွေထဲမှာ “Download and install Fortnite through your browser” ဆိုတာအပြင် “necessary to install any app outside of the Play Store” လို့ပါတဲ့အတွက် Play Store မှာမဟုတ်ဘဲ Epic ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ browser ရွေးပြီးတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ အောက်မှာ Source code မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း SS ရိုက်ပြထားပါတယ်။
Fortnite က Play Store ပေါ်မတင်ရတာဘာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ? တကယ်ဆို Android user အများစုက သူတို့လိုချင်တဲ့ App အများစုကို Play Store ကနေ ယူကြတာများတော့ Epic အနေနဲ့ ဆော့နိုင်ချေရှိတဲ့ Player အရေအတွက်တွေ အနည်းနဲ့အများတော့ လျှော့မှာသေချာပါတယ်။ အရမ်းကိုဆော့ချင်ပါပြီဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အလုပ်နည်းနည်းပိုရှုပ်ခံရမယ့်ပုံပါပဲ။
Epic အနေနဲ့ Play Store ပေါ်မတင်ဘဲ ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် in-app purchase တွေကို Google နဲ့မျှစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Play Store ပေါ်တင်လိုက်ရင်တော့ Fortnite အနေနဲ့ Google ကို 30% ပေးရမှာပါ။ iOS Fortnite တုန်းကတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူပေါင်း သန်း၁၀၀ ကျော်သွားပြီး in-app purchase ကိုက ဒေါ်လာသန်း ၁၆၀ ကျော်တဲ့အတွက် Play Store ပေါ်မတင်တာက Epic အတွက် အမြတ်ပိုကျန်ပါလိ့မ်မယ်။
Beta ဗားရှင်းထွက်မထွက်ကတော့ မသေချာသေးပါဘူး။ Galaxy Note9ထွက်ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
PC တှေ Console နဲ့ iOS gamer တှေ အဆော့အမြားဆုံးဂိမျးဖွဈနပေမေယျ့ Android သမားတှအေတှကျ သတငျးအစအနတောငျသိပျမကွားခဲ့ရတဲ့ Fortnite က အခုရော ဘယျလိုသတငျးလေးတှထှေကျလာနပွေီလဲ??
လကျရှိအခြိနျထိတော့ Android User တှအေတှကျမထှကျသေးပမေယျ့ မကွာတော့တဲ့အခြိနျ (သွဂုတျ၂၄)လောကျမှာ ထှကျလာနိုငျခရြှေိလို့ သိပျစောငျ့ရတော့မယျမထငျပါဘူး။ ဒီတော့ မကွာခငျကိုယျ့ဖုနျး တကျဘလကျတှမှောရတော့မယျ့ ဒီဂိမျးနဲ့ပတျသတျပွီး ဘာတှသေိထားသငျ့လဲကွညျ့ရအောငျ..
မိုဘိုငျးလျဗားရှငျးကလညျး PC တှေ console တှမှောလိုပဲ လကျနကျတှလေညျးအတူတူ၊ မွပေုံတူတူနဲ့ update schedule တှလေညျး တူတူပဲလာမှာပါ။
Control တှကေလညျး Touchscreen ကနပေဲထိနျးရုံပဲဖွဈပွီး ပစ်စညျးကောကျတာတှေ၊ တံခါးဖှငျ့တာတှအေတှကျတော့ အျောတိုလုပျပေးတော့ဆော့ရပိုလှယျပါတယျ။ UI Element ကတှကေတော့ နညျးနညျးလေးကှဲပွားပါတယျ။ Extra building button တှပေျေါလာတတျတာတှေ on-screen ခွရောတှရေော အနီးအနားဘယျကနသေနေတျသံလာသလဲဆိုတာပွောနိုငျတဲ့ Gunshot indicator တှကေလှဲရငျ ကနျြတာက တူတူပါပဲ။
Epic Games ကတော့ ထှကျမယျ့ရကျအတိအကကြို ခုခြိနျထိမကွညောသေးပမေယျ့ ဒီနှရောသီမှာထှကျမယျလို့မှနျးထားကွောငျးတော့ ပွောထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့ဝဘျဆိုဒျမှာလညျး Android ဗားရှငျးကိုမကွာခငျလအနညျးငယျအတှငျးမှာထှကျမယျလို့ပွောပွီးသားပါ။
ဒါပမေယျ့ အခု XDA Developer တှနေဲ့ 9to5Google ကတော့ Android တှအေတှကျ Fortnite က ဒီလမကုနျခငျ Samsung Galaxy Note9တှထှေကျပွီးတဲ့အခြိနျနဲ့ကိုကျပွီးထှကျလာမယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
Galaxy Note9တှကေိုတော့ သွဂုတျလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာရနိုငျမှာဖွဈပွီး Fortnite Android က Note9တှအေတှကျပဲ သီးသနျ့အနနေဲ့ ရကျ ၃၀ လောကျအရငျစောရနမှောဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ Android ဖုနျးတှအေတှကျကတော့ စကျတငျဘာ ၂၃ လောကျမှ ရမယျ့ပုံပါပဲ။
ဒါ့ပွငျ Note9ကိုဝယျတာနဲ့ ($150/AU$200 လောကျတနျတဲ့) free V-Buck တှအေပွငျ Skin အသဈတှနေဲ့ တခွားတခွားသော အရာတှပေါ ရဦးမှာဖွဈကွောငျး ဝဘျဆိုဒျတှကေဖျောပွထားပါတယျ။
Fortnite ကို ဘယျ Android ဖုနျးတှမှော ဆော့လို့ရနိုငျမလဲ??
Epic ကတော့ နှုတျလုံစှာနဲ့ဘာသတငျးအခကျြအလကျမှမပေးပမေယျ့ XDA Developer တှကေတော့ ဂိမျးရဲ့ဝဘျဆိုဒျ Source code တှကေိုရှာတဲ့အခါမှာ Fortnite ဆော့လို့ရမယျ့ Android ဖုနျး အလုံး ၄၀ လောကျကိုတှပေ့ါတယျ။ အောကျမှာဆော့လို့ရမယျ့ဖုနျးတှရေဲ့စာရငျးကိုပွထားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တဈခုရှိတာက ဂိမျးထှကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ ဒီဖုနျးတှအေပွငျနောကျထပျဖုနျးတျောတျောမြားမြားကိုပါ ထောကျပံ့ပေးမှာပါပဲ။ ဒီထဲမှာဆို ပါသငျ့တဲ့ Huawei P20 Pro, OnePlus 6, LG G7 ThinQ တှတေောငျမပါသလို ဘယျတကျဘလကျမှလညျး မပါသေးတော့ နညျးနညျးတော့စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါပဲ။
ဘယျလို Install လုပျမလဲ?
Fortnite ကတော့Google Play Store ပျေါတငျမှာမဟုတျပါဘူး။ Source code တှထေဲမှာ “Download and install Fortnite through your browser” ဆိုတာအပွငျ “necessary to install any app outside of the Play Store” လို့ပါတဲ့အတှကျ Play Store မှာမဟုတျဘဲ Epic ရဲ့ကိုယျပိုငျဝဘျဆိုဒျမှာ browser ရှေးပွီးတော့ ဒေါငျးလုပျဆှဲရမယျထငျပါတယျ။ အောကျမှာ Source code မှာတှရေ့တဲ့အတိုငျး SS ရိုကျပွထားပါတယျ။
Fortnite က Play Store ပျေါမတငျရတာဘာကွောငျ့ဖွဈမယျထငျပါသလဲ? တကယျဆို Android user အမြားစုက သူတို့လိုခငျြတဲ့ App အမြားစုကို Play Store ကနေ ယူကွတာမြားတော့ Epic အနနေဲ့ ဆော့နိုငျခရြှေိတဲ့ Player အရအေတှကျတှေ အနညျးနဲ့အမြားတော့ လြှော့မှာသခြောပါတယျ။ အရမျးကိုဆော့ခငျြပါပွီဆိုတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အလုပျနညျးနညျးပိုရှုပျခံရမယျ့ပုံပါပဲ။
Epic အနနေဲ့ Play Store ပျေါမတငျဘဲ ဝဘျဆိုဒျကနတေိုကျရိုကျဒေါငျးခိုငျးလိုကျတဲ့အတှကျ in-app purchase တှကေို Google နဲ့မြှစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Play Store ပျေါတငျလိုကျရငျတော့ Fortnite အနနေဲ့ Google ကို 30% ပေးရမှာပါ။ iOS Fortnite တုနျးကတော့ ဒေါငျးလုပျဆှဲသူပေါငျး သနျး၁၀၀ ကြျောသှားပွီး in-app purchase ကိုက ဒျေါလာသနျး ၁၆၀ ကြျောတဲ့အတှကျ Play Store ပျေါမတငျတာက Epic အတှကျ အမွတျပိုကနျြပါလိ့မျမယျ။
Beta ဗားရှငျးထှကျမထှကျကတော့ မသခြောသေးပါဘူး။ Galaxy Note9ထှကျပွီးအခွအေနကေိုစောငျ့ကွညျ့ရမှာပါပဲ။
Laptop မှာ နောက်ထပ် Screen တစ်ခုအနေနဲ့ ချဲ့သုံးလို့ရမယ့် DUO (screen extender)